Waa Maxay Noocyada Toddobada?
Toddobaadyada 'Plain Weave' waa kuwa ugu badan ee la isticmaalo uguna fudud fiiqda dharka. Fiilo kasta oo dunsan (silig soconaya-isla markaana u dhigma dhererka dharka) waxay si isdaba joog ah u dhaafaysaa oo ka hooseysaa siligyada si is daba socda u maraya marada (buuxi ama fiilooyin fiilooyin) oo ah xaglaha 90 darajo. Waxay leedahay noocyo aad u ballaaran oo ah ...
Cilladaha mesh mesh?
1. Calaamadaha Isku laabma: Calaamadaha xariijimaha dusha mesh silig aan la tirtiri karin. 2. Holes Broken: Fiilooyin badan oo jajab ah isla goobta ayaa ka sameysmay god dusha sare ah. 3. Meelaha Rusty: Midabbada waxaa ku beddelay daxalka. Midabbada dusha sare. 4. silsilad jabay: silig kali ah ayaa jabay. 5. Silig Dib Ulaabasho: ...
Sidee Loo Cabiraa Maro silig?
J: Mashiinka Hawada ayaa tilmaamaya aagga furan ee u dhexeeya siligyada isbarbar socda. B: Tirada Mesh ayaa loo aqoonsaday inay yihiin tirada furitaanka halkii inji oo toosan. Tirada mesh waxaa lagu tusi karaa inay yihiin tiro dhan, jajab, ama laba lambar mooyaane haddii maaddadu ay tahay dhar qaas ah oo loo yaqaan maro bannaan - mid kasta ...